अमेरिकाबाट भोलि आइपुग्छ १५ लाख डोज खोप, क-कसले लगाउन पाउँछन् ? — Imandarmedia.com
अमेरिकाबाट भोलि आइपुग्छ १५ लाख डोज खोप, क-कसले लगाउन पाउँछन् ?
काठमाडाैं । अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामार्फत दिने भनेको जोनसन एन्ड जोसनको १५ लाख डोज खोप भोलि (सोमबार) बिहान नेपाल आइपुग्दै छ।
एक डोज लगाए पुग्ने सो खोप १५ लाख मानिसलाई पुग्ने छ। तर उक्त खोप क-कसलाई लगाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सोको निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने भनिए पनि खोप कसले पाउने भनेर अझै टुंगो भइनसकेको मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले जानकारी दिए।
‘खोपका लागि धेरैको निवेदन आएको छ। तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ उमेर समूह नै छ। उमेर समूह अनुसार कम उमेरमा जान्छौं। ६० वर्ष कम उमेर समूहका मानिसहरू, विदेश जानुपर्ने व्यक्तिहरू छलफलको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने।
खोप सल्लाहकार समितिले समेत उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले ५५ वर्ष माथिका उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिन सुझाएको जनाए। ‘हामीले उमेर समूहलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिनुपर्छ भनेका छौं। मन्त्रालयबाट आज निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा छ,’ उनले भने।